Xogta laga iPhone wareejiyo HTC Mid ka mid ah X / doonayay oo / ugaar
Sidaas waxaan is caajisaan la iPhone oo aan runtii sida HTC ka mid ah oo aad jeclaan lahayd si aad u hesho waxa (sugaya tahay chelu naarke) laakiin waxaan ka helay in fikirka badan ayaan of music on my telefoonka oo aan u baahanahay si loo hubiyo in aan m ay awoodaan in ay bartey wareejiyo music in si HTC mid.
Wax ugu danbeysay ee aad rabto in uu dhaco waxaan u maleynayaa in laga yaabaa in aad iibsato kaamil ah HTC Mid ka mid ah M8, laakiin ku xayiran xogta oo dhan, sida ay xiriiro iyo music on hore iPhone. Wareersanahay wixii aad samayn karto? Halkan waa war wanaagsan idiin. Waxaa jira barnaamij lagu caawiyo in aad wareejiso xogta iPhone inay ka kaaftoomi HTC si xor ah.
IPhone wareejiyo HTC
HTC Copy in HTC
Demi Nokia in HTC
Sida loo Copy Xiriirada, Calendar, Messages, Video, Photos & Music ka iPhone in HTC
1. Ku rakib Lugood, Lugood waa in lagu xiraa si loo hubiyo kala iibsiga guul la Wondershare MobileTrans. 2. Kaabta iyo soo celinta: Waxa aad isticmaali kartaa gurmad ah ka iPhone oo u soo celiso qalabka cusub HTC Android.
Wondershare MobileTrans - 1-Guji iPhone in Transfer HTC
Tallaabada 1. Run MobileTrans on Your PC
Ku rakib oo ay maamulaan barnaamijka Wondershare MobileTrans ku on your computer. Bogga, dooro "Phone in Phone" mode Transfer iyo riix Start . Hadda aad waa yimid suuqa kala iibsiga telefoonka.
Tallaabada 2. Isku aad iPhone iyo HTC si aad Computer
Connect telefoonka HTC / kiniin oo iPhone si aad u computer via fiilooyinka USB. Qalabka aad si toos ah lagu soo bandhigi doonaa gudahood suuqa kala iibsiga.
Dooro hadii aad rabto in aad wareejiso content oo dhan ama ay doortaan xogta shakhsiga aad jeclaan lahayd in ay u gudbiyaan.
Tallaabada 3. Start si ay u gudbiyaan iPhone Data in HTC
Guji Start Copy in la bilaabo geedi socodka xogta kala iibsiga iyo in la hubiyo aadan barkinta qalabka aqalka, inta suuqa kala iibsiga wali ku jiro horumar. Riix OK si aad u dhamayso mar bar xaaladda ay gaareen 100% dhamaystirka.
1-Guji Transfer Data - iPhone in HTC
IPhone The in qalab kala iibsiga HTC ka dhigaysa mid ku haboon si ay u gudbiyaan xiriirada, SMS, video, sawiro iyo music ka iPhone in HTC.
Xiriirada Transfer iyo taariikheed ee ka iPhone in HTC.
Music Copy, video, sawiro iyo SMS ka iPhone in effortlessly HTC.
Taageerada iPhone 6s Plus, 6s, iPhone 5s, iPhone 4s, HTC Mid ka mid ah X, HTC Mid ka mid ah M8, iwm
Joogtee oo tayo leh 100% content xogta.
Taageerayaan HTC Qalabka iPhone
macruufka 5/6/7/8/9 iPhone 6s (Plus) iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5, 5c iPhone, iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 3GS
Android 2.1 - 6.0 Android HTC Mid ka mid ah M8, HTC ugaar, HTC Mid ka mid ah X, HTC ugaar S A510E, waxaan jeclahay oo HTC, HTC doonayay oo HD A9191, HTC HAL V, HTC HD jecel yahay, HTC Droid DNA, HTC EVO 3D X515M, HTC dareen, HTC HAL S, iyo in ka badan >>
Ka HTC Bedelka Content in Samsung
Demi ka HTC si iPhone
Nuqul Faylal ay ka HTC in HTC
Xogta laga HTC wareejiyo iPad
Faylal ay ka qalab Android inay HTC Bedelka
Swith Faylal ay ka Nokia si iPhone
Demi Stuff ka Android inay Android
Ka iPod Bedelka Music inay iPhone
Swith Faylal ay ka Symbian si iPhone
Ka Motorola Demi Stuff in Android
Xogta laga BlackBerry wareejiyo iPhone
Waxa la sameeyo haddii qalab aad ku guuldareysto in ay ku xidhmaan Wondershare MobileGo?
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Photos ka LG waa weyn
> Resource > Android > Data Transfer ka iPhone in HTC Mid ka mid ah M8 / One X / doonayay oo / ugaar